Asa sy fiantsoana - Fiangonan'Andriamanitra any Suisse manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-03 > Asa sy fiantsoana
Andro tsara tarehy iny. Tany amin'ny Ranomasin'i Galilia dia nitory tamin'ny olona nihaino i Jesosy. Be dia be ny olona ka nangatahany ny sambon'i Simon Peter hivoaka kely teo ambonin'ny farihy. Tamin'izany no nahafahan'ny olona nandre an'i Jesosy tsara kokoa.
Simon dia matihanina za-draharaha ary tena nahafantatra ny zavatra ilaina sy ny fandrika ao amin'ny farihy. Rehefa vita ny tenin'i Jesosy, dia nangataka tamin'i Simona izy handatsaka ny haratony izay lalina ny rano. Noho ny zavatra niainany matihanina dia fantatr'i Simon fa ny trondro dia hihemotra any amin'ny halalin'ny farihy amin'izao fotoana izao ary tsy hahazo na inona na inona izy. Ankoatr'izay dia nanjono alina tontolo izy ary tsy nahazo na inona na inona. Nankatò ny tenin'i Jesosy anefa izy ary tamim-pinoana no nanao izay nolazainy taminy.
Narian'izy ireo ny harato ary nahazo trondro be dia be izy ireo ka nanomboka triatra ny harato. Niantso vonjy tamin'ny namany izy ireo izao. Niara-nizara ny trondro tamin'ireo sambo izy ireo. Ary tsy nisy nilentika nilentika tao ambanin'ny lanjan'ireo trondro ireo sambo ireo.
Raiki-tahotra avokoa izy ireo noho ny fahagagana tamin’ity hazandrano niarahany ity. Niankohoka teo an-tongotr’i Jesosy i Simona ka nanao hoe: “Tompo ô, mialà amiko! Lehilahy mpanota aho.” (Lioka 5,8).
Jesosy namaly hoe: “Aza matahotra! Manomboka izao dia hahazo olona ianareo.” (Lioka 5,10). Te hampirisika antsika hanao aminy izay tsy vitantsika samirery i Jesosy, satria tsy lavorary isika.
Raha mino ny tenin'i Jesosy isika ka manao izay lazainy dia hahita famonjena amin'ny alalany isika. Saingy amin'ny alàlan'ny famelana ny helony sy ny fanomezana fiainana vaovao miaraka aminy dia nantsoina isika hiasa amin'ny maha masoivohon'izy ireo. Niantso antsika Jesosy hitory ny vaovao tsaran'ny fanjakan'Andriamanitra hatraiza hatraiza. Ny famonjena ny olona dia ambara rehefa mino an'i Jesosy sy ny teniny isika.
Tsy maninona na iza na iza isika satria manana talenta sy fahaizana manao ny asa nanirahana an'i Jesosy. Amin'ny maha-olona nositranin'i Jesosy antsika dia ao anatin'ny fiantsoantsika "hisambotra" olona.
Satria miaraka amintsika mandrakariva Jesosy, dia valiantsika ny fiantsoana azy ho mpiara-miasa aminy. Amin'ny fitiavan'i Jesosy